Inona ireo fitaovana afaka mitondra lohamilina sarobidy kokoa?
Raha mamorona tranonkala iray ianao ary te hanosika azy amin'ny TOP-n'ny karoka fitadiavana, dia tsy vitan'ny hoe mamokatra votoaty avo lenta fotsiny ianao fa mifantoka koa ny sainao sy ny ezaka amin'ny paikady fampifandraisana amin'ny rohy. Na mikasa hivarotra kitapo organika ho an'ny tranokalanao fotsiny ianao, mangalatra rindran-damina amin'ny mpifaninana aminao na mahazo rindran-kaonty vola, mila manana drafitra an-tery ianao. Ny teboka fototra amin'ny drafitrao dia tokony ho fanatsarana votoaty tsara. Ny votoatinao betsaka kokoa azonao, ny safidy lavitra kokoa dia ho azonao avy amin'ny rohy mankany anaty. Na izany aza, raha ny marina, tsy afaka manome antoka anao izy fa hanangana rohy fananganana rohy tsara. Tim, rehefa mandeha ny spammy, lozisialy marefo dia mety hampiroborobo ny ezaka SEO anao ary hanangana ny toerana misy anao ao amin'ny pejy valin'ny fikarohana, dia lasa. Koa satria Google no nanavao ny algorithm misy azy, ny adiresy spammy dia miteraka fahavoazana noho ny tsara ho an'ny fanentanana fanentanana tranokala. Amin'izao fotoana izao, ny kalitaon'ny rohy fidirana ihany no tena manan-danja. Koa satria ny backlinks dia mitoetra ho singa manan-danja, dia mila mampihatra paikady fananganana rindrambaiko amin'ny tranokalanao. Ny fomba fijerin'ny rohy fananganana fananganana dia miankina amin'ny karazana habaka anananao sy ny tanjon'ny orinasa. Na aiza na aiza toerana ijoroanao, dia zava-dehibe ny mandany fotoana hianarana bebe kokoa momba ny backlinks (fitaovam-pivoarana) izay natao hanampiana anao hamokatra valiny mahasoa ho an'ny fikarohana finday.
Ao amin'ity lahatsoratra ity dia hahita fitaovana matihanina izay afaka hanampy anao hanangana fanentanana fananganana rohy ianao ary hanatsara ny fijerinao ny marika.
Semalt Auto SEO dia fitaovana fanadiovana fikarohana tokana ho an'ny fampiroboroboana ny tranokala. Natao ho an'ireo mpivarotra an-tserasera izay te hanohy tsy tapaka ireo rindran-kira vaovao tsy misy vola amin'ny vola an-tserasera. Ity fitaovana ity dia manome ny mpiserasera amin'ny sehatra fitsaboana samihafa izay ahitana ny teny fikarohana, ny fanadihadiana amin'ny tranokala, ny fikarohana amin'ny tranonkala, ny fanitsiana fahadisoana ny tranonkala, ny fananganana rohy, ny fanavaozam-baovao ary ny fanohanan'ny mpanjifa. Ny Semalt Auto SEO dia manampy amin'ny fikarakarana siramamy raozy avy amin'ny tompony ary manan-danja amin'ny tranokala misy tsenam-bokatra. Ny tranonkala dia manana tranonkala miisa maherin'ny 50,000 miompana amin'ny lohahevitra samihafa, izany no mahatonga ity fitaovana ity hanome fahafaham-po ny filan'ny orinasa rehetra. Ny tombontsoa iray hafa amin'ny tolotra dia ny hoe ny backlinks rehetra dia tafiditra ao anaty votoaty miavaka sy manan-danja izay azo tanterain'ireo mpandika lahatsoratra matihanina amin'ny Seminera. Ny fanorenana ny rohy dia tanterahina tsikelikely araka ny habeny: 40% - rohy fanamarihana; 50% - rohy tsy ankinina; 10% - rohy marika anarana.
BackLinker dia fitaovana iray izay manangana automatique an'arivony manana backlinks amin'ny kalitaon'ny pejy Internet anao. Ity fitaovana ity dia mamorona rohy ivelany amin'ny tranonkala fanta-daza, izay matetika nozaraina amin'ny fikarohana bots. Misy safidy roa azonao ampiasaina hanolotra ny tranokalanao - tranonkala azo tsidihana (backlinks miisa 2500+) sy tranokala premium (100 backlinks momba ny kalitaon'ny ambony).
Mijere ny rohy
Ity fitaovana ity dia ampiasaina amin'ny Google extension. Izany no mahatonga ny mora ampiasaina ny "Check My Links" ho an'ny paikady fanadiovana fikarohana. Ity fitaovana ity dia manampy amin'ny famoronana rohy mahazatra avo lenta miaraka amin'ny fanampiana ny fanoloana rohy tapaka amin'ny loharanom-baovao hafa. Izany dia ahafahana manara-penitra ny dingana amin'ny alàlan'ny fandefasana bakeraly. Amin'ny alalan'ity fanitarana ity, afaka scana haingana ny tranonkala momba ny rohy tapaka Source .